Taariikhda Soomaaliya - BAARGAAL.NET
search engine taariikh
Dalka Soomaaliya waxa uu ku yaalaa geeska Africa wuxuuna ku fadhiyaa dhul baaxadiisu dhantahay 635.541km2, waxana uu xuduud la wadaagaa Bari waxaa ka xiga Badweynta hindiya, waqooyina waxaa ka xiga Jabuuti, Galbeedna dalka Itoobiya, halka koonfur galbeedna uu ka xigo dalka Kenya. Dalka Soomaaliya waxa uu yahay dalka labaad ee ugu xeebta dheer qaaradda Africa wuxayna leedahay xeeb dhirirkeedu tahay 3333km.
Tirada dadka Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa 8,000,000 oo qof.
60% Soomaalidu waa dad reer baadiya ah , 20% waa dad reer magaal ah, 15% waa dad beeralay ah iyo 5% oo ah dad Kaluumayato ah.
khubarada ka faaloota taariikhda dalka Soomaaliya waxa ay sheegeen in erega Soomaaliya uu ka taaganyahay labo eray oo la'isku geeyay, kuwaasi oo kala ah (Soo-Maal), iyadoo eraga Soo macnihiisa loola jeedo Soco, halka ereyga Maal uu macnihiisu ka soo jeedo Lis.
Taariikh ahaan dalkayagu waxa uu lahaan jiray xadaarad facween waxaana dalkeena loo aqoon jiray magacyo badan sida Dhulkii udgoonaa ,Dhulkii eebe iyo Geeska Africa.
Caasimadda dalkeena waa Muqdisho, tan labaadna waa Hargeysa, tan sadaxaadna waa Kismaayo, tan afaraadna waa Burco, halka tan shanaadna waa Baydhabo, goboladii ugu horeeyay ee xornimadiisa qaata dalkeena waxa uu ahaa gobolka Waqooyi waxaana xornimadooda ay qaateen 26kii bishii June sanadii 1960kii halka gobolada kale ee koonfurtana ay xornimadooda qaateen 1-dii bishii Luulyo sanadii 1960kii.
Shirkii gumeestayaasha Africa ee lagu qeybsaday Africa ee ka dhacay Baar-liin 1884-tii ayaa dalka Soomaaliya loogu qeybiyey 5qeybood waxana shantaasi qeybood ay kala ahaayee:
Gobolada Waqooyi oo la siiyay gumeestihii Ingiriiska.
Gobolada koonfureed oo la siiyay gumeystihii Talyaaniga.
Xeebta Soomaaliyeed ee Jabuuti ee loo dhiibay gumeystihii Faransiiska.
N.F.D oo iyadana la siiyay dalka Kiiniya.
Iyo gobolada Soomaali galbeed oo gacanta loo geliyay Dawladda Itoobiya.
shantaan gobol waxaa la isku yiraahdaa shanta Soomaaliya taariikhdu markii ay eheyd 27kii bishii June sanadii 1977 ayay Jabuutina xornimadeeda qaadatay, waxaasa wali gacanta gumeestaha ku jira Soomaali galbeed iyo N.F.D.
Hadaba markii ay xurnimada qaateen gobolada Koonfureed sanadii 1960kii waxay ahaayeen lix gobol oo kala ahaa gobolka Banaadir, gobolka Hiiraan, Gobolka Mudug iyo Gobolka Bari sidoo kale waxaa iyana ku soo idarsamay goboladii waqooyi ee iyaguna isla sanadkaas xornimada qaatay waxayna ku soo darsadeen koonfurta lbadii gobol ee xiligaasi gobolada waqooyi la'isku oran jiray, ee gobolka Waqooyi, Galbeed io gobolka Togdheer waxana ay isku noqdeen goboladii jamhuuriyadda sideeda gobol, markii uu kacaankii milatariga ahaa dalka Qabsaday ee la qaaday ololihii horumarinta reer miyiga ee sanadii 1973dii ilaa 1974tii xiligaasoo ay timid baahi ween oo ahayd in la magacaabo gobolo kale markaas waxaa sideedii gobol lagu kordhiyay todobo kale waxayna tirada gobolada dalka noqdeen shan iyo toban gobol Bilowgii sanadii 1980kii waxaa lagu kordhiyay gobolka Jubada dhexe, dabayaaqadii sideetameeyadii ayaa iyana la magacaabay gobolada Sool iyo Awdal xiligaasoo tirada gobolada dalku noqdeen sideed iyo toban gobol.
Shaxda Gobolada iyo Degmooyinka Dalkeena.
1. Gobolka Banaadir.
Shingaani Hodan Howlwdaag Shibis
Boondheere Yaaqshiid Kaaraan XamarJabjab
Xamarweyne Cabdicasiis Wadajir Waaberi
Wardhiigley Heli waa Dharkiinley Dayniile
Dhaqaalaha gobolka Banaadir waxa uu ku tiirsanyahay Ganacsiga.
2. Gobolka Shabelada Dhexe.
Jowhar Balcad Cadale
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay jowhar, dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay Beeraha
3. Gobolka Hiiraan.
Beledweyne Buuloburte Jalalaqsi
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Beledweyne, dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay xoolaha nool iyo beeraha.
Dh/mareeb Caabudwaaq Ceelbuur
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Dhuuso mareb dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay xoolaha nool.
5. Gobolka Mudug
Gaalkacyo Hobyo Jariiban
Xarar dheere. Galdogob
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Mudug dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay xoolaha nool.
Garoowe Eyl Sinujiif
Boocane Rabaable Burtinle
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Garoowe dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay xoolaha nool.
7. Gobolka Bari.
Boosaaso Qandala Iskushuban
Bandarbayla Caluula Qardho
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Boosaaso dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay Ganacsiga iyo Kaluunka.
Laascaanood Xudun Caynabo
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Laascaanood dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay xoolaha nool.
Ceerigaabo Laasqoray Ceel afweyn
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Ceeri gaabo, dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay xoolaha nool gaar ahaan ariga.
Burco Owd weyne Sheekh
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Burco, dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay xoolaha nool gaar ahaan geela iyo ariga.
11. Gobolka waqooyi galbeed.
Hargeyso Berbera Gabiley
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Hargeyso dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay ganacsiga iyo xoolaha nool.
12. Gobolka Awdal.
Baki Boorame Saylac
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Baki dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay ganacsiga iyo xoolaha nool.
13. Gobolka Sh/hoose.
Marka Baraawe Qoryooley
Afgooye Wanlaweyn Kurtunwaarey
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Marko dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay beeraha iyo xoolaha nool.
14. Gobolka Bay.
Baydhabo Buurhakaba Diinsoor
Ufurow Qansax dheere Bardaale.
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Baydhabo dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay beeraha iyo xoolaha nool.
15. Gobolka Gedo.
Garbahaarey Luuq ganaane Doolow
Beled Xawo Ceelwaaq Baardheere.
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Hargeyso dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay Beeraha iyo xoolaha nool.
16. Gobolka Bakool.
Xudur Waajid Yeed
17. Gobolka Jubada Dhexe.
Bu'aale Dajuumo Baardheere
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Bu'aale dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay Beeraha.
18. Gobolka Jubada Hoose.
Kismaayo Afmadow Badhaadhe
Gobolkan waxaa magaala madaxdiisu tahay Hargeyso dhaqaalihiisuna waxa uu ku tiirsanyahay ganacsiga iyo xoolaha nool gaar ahaan Lo'da.
Dhererka u dhexeya Gobolada dalka.
Shaxda soo socota ayaa waxa ay muujinaysaa fogaanta u dhexeysa Gobolada dalkeena iyo magaala madaxda.
Xamar 247km Baydhabo Xamar 550km Dhuusomareeb
Xamar 111km Marka Xamar 1600km Hargeysa
Xamar 90km Jowhar Xamar 1220km Laascaanood
Xamar 335km Beledweyne Xamar 925km Garoowe
Xamar 485km Bu'aale Xamar 1505km Boosaaso
Xamar 500km Kismaayo Xamar 1800km Baki
Xamar 430km Xudur Xamar 1340km Burco
Xamar 505km Garbahaarey Xamar 1450km Ciiregaabo
Xamar 750km Gaalkacyo
Hadaba shaxdan kalena waxa ay qayexeysaa fogaanta ay isu jiraan qaybo ka mid ah magaalooyinka dalkeena Soomaaliiya.
Muqdisho 30km Afgooye Afgooye 164 Buurhakaba
Buurhakaba 66km Baydhabo Baydhaba 150km Luuq
Baydhaba 155km Xudur Luuq 80km Doolow
Luuq 69km Garbahaarey Garbahaarey 129km Baardheere
Baardheere 195km Baydhaba Baardheere 260km Jilib
Jilib 114km Kismaayo Kismaayoq 139km Afmadow
Kismaayo 195km Dhoobley Muqdisho 113km Marka
Marka 193km Baraawe Baraawe 168km Jilib
Muqdisho 95km Jowhar Jowhar 121km Buuloburte
Buuloburte 116km Beledweyne Beledweyne 45km Feerfeer
Jowhar 140km Cadale Cadale 185km Ceeldheer
Ceel dheer 162km Ceel buur Ceel buur 110km Sindago
Sindago 164 Beledweyne Sindago 220km Gaalkacyo
Gaalkacyo 256km Hobyo Gaalkacyo 260km Garoowe
Garoowe 219 Eyl Garoowe 222km Qardho
Qardho 258km Boosaaso Qardho 221km Bandarbayla
Iskushuban 280km Caluula Caluula 40km Bareeda
Caluula 105km Baargaal Garoowe 132km Laascaanood
Laascaanood 141 Ceeldhaab Ceeldhaab 255km Ceerigaabo
Ceeldhaab 120 Burco Burco 148km Berbera
Hargeysa 177km Burco Hargeysa 70km Gebiley
Gebiley 52km Boorama Boorama 269km Saylac
Saylac 21km Lowyacado Xudur 115km Yeed
Xudur 242km BuuleBurte
Kheyraadka Dabiiciga ee Soomaaliya.
Dalkeena waxa uu leeyahay kheyraad fara badan oo aanan halkaan ku soo koobi karin waxaasa ka mid ah kheyraadka dalkeena laga helo:
Xoolaha la dhaqdo kuwaasoo loo qeybiyo afar qeybood kalana ahGeela Lo'da oo iyagu la'isku yiraaho Ishkin, Idaha iyo Eriga hadii aynu eegno magacyada loogu kala yeero noocyada xoolaha ayaa waxa ay kala yihiin:
1. Geela kan lab waxaa loogu yeeraa Rati kan dhadigna Halmarka ay yaryaryihiina waxaa la yiraahdaa Nirig iyo Qurbac. 2. Lo'da neefka lab waxaa loogu yeeraa Dibi kan dhadigana Sacmarka ay yaryaryihiina waxaa loogu yeeraa Wayl iyo Wayl ama Aalo. 3. Riyo riyaha neefka Lab waxaa lagu magacaabaa Orgi kan dhadigna waxaa lagu magacaabaa Ri marka ay yaryaryihiina waxaa lagu magacaabaa Waxar iyo Waxar ama Maqal. 4. Ido idaha neefka lab waxaa la yiraahdaa Wan (Sumal)kan dhedigana waxaa la yirahdaa Lax (Sabeen) marka ay yaryaryihina Nayl ama Baraar.
Dalagyada Soomaalidu Beerato ayaa waxa ay yihiin dalagyo aad u wanaagsan isla markaana aan ka bixin wadamada africa qaarkood waxana shaxda hoos ku qoran ay muujinaysaa magaca dalaga iyo inta uu ku bislaado:
inta ay ku bislaato
Magacyada Geed miroodka ka baxa dalkeena ayaa waxa ay kala yihiin.
Hohob Mareer Gud Dhafaruur Dhuwan Ontoro
Deegaan Dhebi Gob Miracas TukeLalmi Murcood
Kobash Askax Shanfarood Barde Dhamaag Qoone
Wax soo saarka Badda dalkeena Soomaaliya waxa uu leeyahay labo badood oo kala ah Badda Cas iyo Badweynta Hindiya waana dal ay dhamaantiis ku dharersantahay Bad laga soo biloobo Cirifka Koonfureed ee Raaskambooni ilaa Cirifka Waqooyi ee Raascaseyr, magaalooyinka dhaca xeebaha waxaa ugu caansan saylac, berbera, caluula, boosaaso, iskushuban bandarbayla, hobyo ,muqdisho, marka ,baraawe, kismaayo
Wabiyada dalkeena Dalkan Soomaaliya waxaa mara labo wabi oo kala ah Jubba iyo Shabele waxayna ka yimaadaan dalka Itoobiya waxaana ugu dheer Webiga Shabele oo dhererkiisu uu gaarayo 1500km, waxaase ugu weyn uguna biyo badan webiga Jubba oo dhererkiisu uu gaarayo 800km. magaalooyinka ay dalka ka maraan hadaan soo qaadano webiga Shabele wuxuu dalka ka soo galaa xadka uu gobolka Hiiraan la leeyahay dalka Itoobiya meel u dhow magaalada Feer-feer wuxuuna soo maraa magaalyooyinka Beledweyne, Buuloburte, Jowhar, Balcad, Agooye, Jannaale wuxuuna ku dhamaadaa meesha la yiraahdo Dhaytubaako oo u dhexeysa Jilib iyo Shalaanbood, Wabiga Jubba isagu waxa uu dalka ka so galaa Xuduuda uu gobolka Gedo la leeyahay dalka Itoobiya wuxuuna soo maraa magaalooyinka Doolow Luuq Baardheere Bu'aale Jilib, Mareerey Kabsuuma iyo Jamaame wuxuuna ku dhamaadaa oo uu badda kaga darsoomaa meesha la yiraahdo Goobweyn oo Kismaayo u jirta 25km.
Maalmaha dalkeena lagu qadariyo oo la xasuusto ayaa waxaa ka mid ah" 1. 26kii Juun 1960kii xornimadii gobolada Waqooyi.
2. 1dii Luulyo 1960kii midoobidii Gobolada waqooyi iyo Koonfur.
3. 1dii luulyo 1960kii xornimadii Gobolada koonfureed.
4. 12ka Abril Aas aaskii calanka iyo maalinta xooga dalka Soomaaliyeed.
5. 8da Maarso maalinta haweenka Soomaaliyeed
6. 5tii Octobar 1949kii dagaalkii dhagax tur iyo hanoolaato.
7. 27kii Juun 1977kii xornimadii dalka Jabuuti.
8. 15kii Maajo 1943kii aasaaskii ururka S.Y.L
9 . bishii Ocotobar 18-20 1971kii shirkii ururka midowga Africa ayaa lagu qabtay Xamar. 10. 20kii bishii 12aad sanadii 1950kii aasaaskii booliska soomaaliyeed
11. 21 octobar sanadii 1972dii qoraalkii farta Soomaaliga
12. 16kii Febrayo 1974tii Soomaaliya waxay ku biirtay Jaamacadda carabta.
13. 1528-1542kii halgankii Axmed Gurey ee Itoobiya iyo Bortaqiiska.
14. 1900-1921juu Gakgabkii Sayid Max'ed Cabdulle Xasan ee Ingiriiska.
15. 1da April 1950kii heshiiskii Q.M iyo talyaaniga ee xornimo gaarsiinta Soomaaliya.
16. Bishii Luulyo 1960kii waxaa dalka madaxweyne u noqday Aadan Cabdulle Cismaan.
17. Bishii Juun 1967dii waxaa dalka madaxweyne u noqday Cabdi Rashiid Cali Sharma'arke.
18. bishii Octobar 1969kii waxaa dalka madaxweyne u noqday Max'ed Siyaad Barre
19. Warshadii kaluunka Laasqoray waxaa la aasaasay 1970kii
20. Warshadda dharka Balcad waxaa la aasaasay sanadii 1968dii
21. Warshadda sonkorta Jowhar waxaa la aasaasay 1962dii
22. Warshadda Caanaha Xanar waxaa la dhisay 1966kii
23. Warshadda Hilibka ee Kismaayo waxaa la dhisay 1973kii.